Mareykanka oo ka dalbaday Turkiga in Gantaalada uu ka iibsaday Ruushka ku wareejiyo Ukraine | Arrimaha Bulshada
Home News Mareykanka oo ka dalbaday Turkiga in Gantaalada uu ka iibsaday Ruushka ku wareejiyo Ukraine
Mareykanka oo ka dalbaday Turkiga in Gantaalada uu ka iibsaday Ruushka ku wareejiyo Ukraine
Bulsha:- Dowladda Mareykanka ayaa wada dedaalo ay ku qancineyso waddamada katirsan Gaashaanbuurta NATO iyo Midowga Yurub ee Ruushka ka iibsaday hubka casriga in ay ku wareejiyaan hubkaasi dowladda Ukraine.
Saraakiil Mareykan ah ayaa la sheegay in Turkiga kala hadleen suurto galnimada in gantaalaha difaaca hawada ee S-400 ee uu Ruushku sameeyay kana iibsaday dowladda Turkiga in ay ku taageeraan dowladda Ukraine ee dagaalka kula jirta Ruushka.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay saraakiisha Mareykanka bishii hore soo jeedintan si aan rasmi aheyn ugu gudbiyeen Turkiga, waxa ayna arrintan soo baxday xilli Turkiga booqasho ku tagtay ku-xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Wendy Shermanay.
Mareykanka ayaa la sheegay in waddamada xulufada la ah ee iibsaday hubka iyo qalabka difaaca hawada ee S-300 iyo S-400 ee sameesay dowlada Ruushka ka codsatay in ay ku taageeraan Dowladda Ukrain si ay isaga difaacdo duullaanka Ruushka.
Dowladda Turkiga ayaa loo badinayaa in ay iska diidi doonto codsiga uga yimid dowladda Mareykanka, mana jiro war rasmi ah oo ilaa hada kasoo baxay dowladda Turkiiga oo ku aadan soo jeedinta Mareykanka uga timid.
Mareykanka ayaa horey uga carrooday in Turkiga ka iibsadaan Ruushka gantaalaha difaaca hawada ee S-400, waxa ayna tallaabada Turkiga uga iibsaday Ruushka gantaaladan difaaca keentay in ay isku dhacaan Mareykanka uuna xumaado xiriirka labada dal.